Vaovao - Sinovo dia manondrana rig fandavahana miverimberina any Singapore indray
Mba hahafantarana ny famokarana fitaovana sy hifehezana bebe kokoa ny fandrosoana amin'ny fanondranana rig, dia nankany Zhejiang Zhongrui ny sinovogroup tamin'ny 26 Aogositra mba hijerena sy hanaiky ny zotra fandavahana borosy ZJD2800 / 280 ary ny rafitra fanary fotaka ZR250 halefa any Singapore.
Fantatra tamin'ity fanaraha-maso ity fa ny fitaovana rehetra ao amin'ity andiany ity dia nandalo ny fanaraha-maso feno sy ny fitsapana ny orinasam-panadinana, ary ny antontam-panadinana dia voarakitra an-tsoratra amin'ny antsipiriany, izay afaka miantoka ny fandrosoan'ny tetikasa, ny kalitaon'ny fitaovana ary ny fiarovana azy, fanaraha-maso ny fanekena mialoha ny fanaterana.
Nahavita nanondrana fitaovana famonoana fitrandrahana avo lenta any Singapore indray i Sinovo. Fantatra fa ity andiana fitaovana ity dia hampiasaina amin'ny fananganana tetik'asa fananganana antontam-bolan'ny China Communications Construction Co., Ltd. (Sampana Singapore). Sinovo koa dia hanohy hanaraka ny foto-kevi-dehibe amin'ny "fahamendrehana, matihanina, lanja ary fanavaozana", ary hifantoka amin'ny fanomezana fitaovana fananganana feno sy avo lenta ary azo antoka ho an'ireo orinasam-panorenana ifotony manerantany.
Fotoana fandefasana: Sep-02-2021